Afrostream သည်အာဖရိကရှိသားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်ရုပ်ရှင်ကိုပေးသော Afrikhepri Fondation ဖြစ်သည်
တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာ 20, 2020
Aရေခဲမုန့်, subscription ကို (SVOD) ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူဝယ်လိုအားအပေါ်ဗီဒီယိုအသစ်။ ၎င်းကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်းမပြုမီရက်အနည်းငယ်အလိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာ၏စိတ်နှလုံးတွင်ယဉ်ကျေးမှုအသစ်ကိုဆောင်ကြဉ်းပေးမည့်ဤပြင်သစ်ကုမ္ပဏီကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ခဲ့သည်။ ဤအခါသမယတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်ကမကထဖြစ်သူTonjé Bakang နှင့်စကားပြောခွင့်ရခဲ့သည်။
၎င်း၏အမည်ကိုကကိုဖော်ပြရန်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းသော, Afrostream အဓိကအာဖရိကတိုက်မှဆင်းသက်လာသောဇာတ်ကောင်များပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသောရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးကိုတင်ဆက်သည့်ပထမဆုံးပြင်သစ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူခြင်းဖြင့် ၀ ယ်လိုအားအပေါ်ဗီဒီယို (SVOD) ဟုလူသိများသောအိမ်တွင်းဗီဒီယိုကလပ်စနစ်သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်လူပေါင်း ၈၀,၀၀၀ နီးပါးနီးပါးပြောဆိုလျက်ရှိသောအသစ်သောအယူအဆဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှလူများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ ၂၀၀၀ ကျော်သည်စတင်ခြင်းမတိုင်မီရောင်းခဲ့ရသည်!
ဝယ်လိုအားအပေါ်ဗီဒီယိုကမ်းလှမ်းမှုအပြင်, ပြိုင်ဘက်အများအပြားအကြားရှိပြီးသား, Afrostream လူ ဦး ရေနှင့်အတူအမှန်တကယ်လူမှုရေးကတိကဝတ်ရှိပါတယ်။ စင်စစ်၊ အခြားဗီဒီယိုမီဒီယာများတွင်အနည်းငယ်သာပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်စင်မြင့်သည် SVOD လောကတွင်တော်လှန်ရေးနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပြောင်းလဲရန်ကမ်းလှမ်းသည်။ " ကျနော်တို့စားသုံးမှုအသစ်တစ်ခု mode ကိုဖန်တီးချင်တယ် "ကျနော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Tonje Bakang ယူဆောင်" မီဒီယာ Afro ယဉ်ကျေးမှုကိုအလုံအလောက်စိတ်မဝင်စားခဲ့"။ စီးရီးများနှင့်ရုပ်ရှင်အင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်တွင် (+ စာတန်းထိုး) နဲ့ Afrostream ယင်း၏ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာဖရိကအကြောင်းအရာရဲ့အကောင်းဆုံးက၎င်း၏ subscriber များအားပူဇော်ရန်။
သငျသညျရိုးရှင်းဖြစ်နိုငျသောအခါအဘယ်ကြောင့်ဘဝရှုပ်ထွေး? Afrostream၎င်း၏စီးပွားရေးပုံစံအတွက်တစ်လလျှင်ယူရို ၆.၉၉ မှတစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၉၉.၉၉ အထိပေးသွင်းရန်အမျိုးအစား ၃ ခုကမ်းလှမ်းသည်။ ယခုသင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
စီမံကိန်းစတင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်ပေးသောမျှတမှုအပြင်ကုမ္ပဏီသည်ကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်ကိုပေါင်းစည်းရန်အမေရိကန်သို့သွားခဲ့သည်။ Y ကိုပေါင်းစပ်။ သူမသည်ကျော်ကြားသော ၃ လထောက်ပံ့မှုနှင့်ဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ ပေးအပ်ခြင်း (Y Combinator သည်ကုမ္ပဏီ၏မြို့တော်ကိုဤငွေပမာဏအတွက်လဲလှယ်လျှင် ၇% အထိပေါင်းစည်းသည်) မှကျော်ကြားသော ၃ လထောက်ပံ့မှုကိုရရှိခဲ့ပြီးကတည်းကအောင်မြင်မှုသည်အထမြောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပစ်လွှတ်သည့် 2013 ဘို့စီစဉ်ထားနေစဉ်နိုဝင်ဘာလ 2000 အတွက်ဖြန့်ချိခြင်း, ကုမ္ပဏီ, ယခုတစ်ဒါဇင်န်ထမ်းရှိပြီး 1 subscriptions ကိုကျော်er စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅ ။ မကြာမီစတင်မည့် အချိန်မှစ၍ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အချို့သောအကြောင်းအရာများကိုခေတ္တဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ရည်ရွယ်တည်ထောင်သူများအတွက်အလွန်အားတက်စရာလက္ခဏာများ!
ဖန်ဆင်းခြင်းနေ့စွဲ: နိုဝင်ဘာလ 2013 - စက်တင်ဘာလ 1 2015er အပေါ်တရားဝင်ဖြန့်ချိ
တည်ထောင်သူအမည်နှင့်ဖွဲ့စည်းရေး: Tonje Bakang (Autodidacte), Ludovic Bostral (CTO)
အဘယ်အရာကိုတိုင်းပြည်ကသင်၏ start-up တည်ရှိသောသလဲ? ပြင်သစ်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန: စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်ဝယ်လိုအားကဗီဒီယို (SVOD)
Facebook က: www.facebook.com/afrostreamtv
SOURCE မှ: http://1001startups.fr/afrostream-les-meilleurs-films-et-series-afro-en-streaming
အာဖရိကနိုင်ငံများ၏အမည်များနှင့်အမည်ပြောင်များ၏မူလအစအဘိဓာန် - Arol Ketchiemen
Watch Django ချည်နှောင်ခြင်း (2013)
အမျိုးအစားတစ်ခုရှာပါ Category: Select လုပ်ပါ တစ်ဦးကရှင်းရှင်းလင်းလင်း AFRIKHEPRI-TV ကို လှပ FASHION စာကြည့်တိုက် eBooks အခြေချ အာဖရိကဟင်းလျာ BLACK ခေါင်းဆောင်များ၏စကား Entertainment မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ကလေးများ ပတ်ဝန်းကျင် ကျွန်ခံနေရာ ယဉ်ကျေးမှုအဖွစျအပကျြ ကုမ္ပဏီအဖြစ်မှန်က အာဖရိကကမိန်းမတွေ ဖြစ်ရပ်အကဲခတ် movies ဝှက်ထားတဲ့မမေ့လျော့နောက်ခံ အာဖရိက Initiative REGISTRATION / login BLACK တီထွင်သူနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များ မျိုး အသံ Kamas စာအုပ်ဆိုင် တိုက်ရိုက်တီဗီ ဝယ်စာအုပ် အသံစာအုပ်လေးကို PDF စာအုပ် တေးဂီတ သတင်းသတင်း Paradigm KAMIT Kamite ထငျ တွေးခေါ်ရှင် Sage နှင့်အာဖရိက ဒဿန & Psychology ဒဿနိကဗေဒနှင့်စိတ်ပညာ | ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာ ကစားသမား လင်္ကာ PSYCHART ကုထုံး အာဖရိကနိုင်ငံများ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဝါး သိပ္ပံနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် Shopping ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်ဘာသာရေး အားကစား TEXT မဿဲGröbli ချက်ချင်း / သတင်းများ VIDEOS web-TV ကို